हिमाल खबरपत्रिका | छात्रवृत्तिमाथि शुल्कको ठगी
३१ भदौ - ६ असोज २०७५ | 16-22 September 2018
मेडिकल कलेजहरूले छात्रवृत्तिामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिबन्दमा पारेर अतिरित्त रकम असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन्।
२४ भदौ बिहान १०:३० बजे एक हूल विद्यार्थी बसुन्धरास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेजभित्र छिरे । शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गर्नुअघि अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य पारिएपछि उनीहरू कलेज व्यवस्थापनसँग गुनासो गर्न गएका थिए ।
छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढिरहँदा इन्टर्नसिपको मुखैमा अतिरिक्त रकम तिर्न परिबन्दमा पारिएपछि कान्तिपुर डेन्टल कलेजका विद्यार्थी यतिबेला मानसिक तनावमा छन् । कलेजले साढे चार वर्षको कोर्स पूरा गरेका चार विद्यार्थीसँग इन्टर्नसिप अघि एकमुष्ट जनही रु.१ लाख ९७ हजार मागेको छ (हे.पत्र) । तर, रकम नदिने अडान राख्दै आएका उनीहरूलाई कलेजले इन्टर्नसिप गर्नबाट रोकेको छ । समयमा इन्टर्नसिप गर्न नपाउँदा विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुने समय धकेलिंदै गएको छ । एक वर्षको इन्टर्नसिप सकेपछि मात्र विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको ८ पुस २०७० को निर्णय अनुसार ‘निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट कलेजले भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जस्ता कुनै पनि शुल्क नलिने’ भनिएको छ । तर, उक्त कलेजले नियम विपरीत विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आफू मातहतका मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा शुल्क रु.७ हजार तिरे पुग्ने नियम बनाएको छ । तर, केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त कान्तिपुर डेन्टल कलेजले तेस्रो र चौथो वर्षमा डेन्टल पढिरहेका विद्यार्थीबाट वार्षिक परीक्षा शुल्क भन्दै क्रमशः रु.२ लाख १७ हजार र रु.२ लाख ५० हजार मागेको छ ।
त्यसो त कलेजका एकाउन्टेन्ट पुरुषोत्तम अधिकारीले भर्ना हुने बेलामै परीक्षा शुल्क वापत रु.१ लाख बुझउन दबाब दिएका थिए । तर, अहिले कलेज सञ्चालकले सो रकम बढाएर रु.२ लाख भन्दा बढी पुर्‍याएका छन् । विद्यार्थीहरू कलेजका सञ्चालक तथा कर्मचारीले आफूहरूलाई मानसिक दबाबमा पारेर रकम असुल्ने गरेको बताउँछन् । अध्ययन सकेर इन्टर्नसिप पर्खिरहेका एक विद्यार्थी भन्छन्, “इन्टर्नसिप गर्दा विद्यार्थीलाई कलेजले उल्टै मासिक रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजका एकाउन्टेन्टले इन्टर्नसिप गर्नुअघि हामीसँग पैसा मागेका छन् । इन्टर्नसिप गर्दा दिनुपर्ने मासिक रु.११ हजार पनि नदिने भनेर पहिल्यै भनिसकेका छन् ।” केयूको प्रावधान अनुसार बीडीएस तथा एमबीबीएस कोर्स पूरा गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउँदा कलेजले मासिक रकम दिनुपर्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख हरि लम्साल कलेजले मन्त्रालयले तोकेको बाहेक अनावश्यक शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीकहाँ उजुरी आएको छैन । कलेजले बढी रकम असुलेको हो भने कारबाही गर्छौंै ।”
डा. श्रेष्ठले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीबाट वर्षमा दुई पटकसम्म हुने आन्तरिक जाँच, वार्षिक जाँच, कलेजको सम्बन्धन शुल्क, विद्यार्थीलाई सामुदायिक कार्यक्रममा सहभागी गराउँदाको शुल्क लिने गरेको स्वीकारे । श्रेष्ठ विद्यार्थीबाट आन्तरिक परीक्षा वापत रु.११ हजारदेखि रु.१२ हजारसम्म र केयूले तोके अनुसार वार्षिक परीक्षा वापत रु.९ हजार लिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यार्थीसँग इन्टर्नसिप अघि रकम मागेको होइन, साढे चार वर्षको एकमुष्ट शुल्क जम्मा भएको हो ।” उनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थीको प्रोभिजनल रजिष्ट्रेसन नगरिदिएका विद्यार्थीले मात्रै इन्टर्नसिप शुरू गर्न नपाएको बताउँछन् । कलेजका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरे पनि कलेजले इन्टर्नसिप गराउनुअघि विद्यार्थीलाई भराउने आवेदन फारममा एकमुष्ट रकम तिरेको भनी एकाउन्टेन्टले प्रमाणित नगरेको पाइएको छ (हे.फारम) ।
कान्तिपुर डेन्टल कलेजले विद्यार्थीलाई परिबन्दमा पारेर रकम असुल्ने धन्दा नयाँ होइन । सन् २०१० मा उक्त कलेजमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका एक विद्यार्थीले सन् २०१६ मा अध्ययन पूरा गरे । शिक्षा मन्त्रालयको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढेका कारण उनीसँग कलेजले हरेक परीक्षा अगाडि एकमुष्ट रकम रु.१ लाख ५० हजार नबुझए परीक्षा दिनै नपाउने अडान राख्यो । पछि रकम बुझउने आश्वासन दिएर उनी परीक्षामा सहभागी भए । कलेजले अनावश्यक रकम मागेको भन्दै उनले पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखामा निवेदन दिए, तर वास्ता भएन । जसोतसो पढाइ पूरा गरेका उनले कलेजबाट प्रमाणपत्र लिने बेला आयो । कलेजले रु.१ लाख ५० हजार नदिए प्रमाणपत्र नदिने भनेर अड्को थाप्यो ।
सन् २०१६ मा उनी सहित कलेजबाट छात्रवृत्तिमा पढेका १० जना पास आउट भएका थिए । प्रमाणपत्रमा भविष्य जोडिएकाले उनले ऋण खोजेर भए पनि कलेजलाई रु.१ लाख ५० हजार बुझए । अहिले उपत्यका बाहिरको एक अस्पतालमा चिकित्सा अभ्यास गरिरहेका उनी भन्छन्, “त्यतिबेला कलेजले रकम माग्दा हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा हारगुहार गर्यौं, तर केही भएन ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्स (युसिएमएस) मा पनि कान्तिपुर डेन्टल कलेजको जस्तै समस्या छ । सन् २०१२ मा छात्रवृत्तिमा पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थीबाट कलेजले प्रति विद्यार्थी रु.५३ हजार अतिरिक्त रकम असुल्यो । उक्त ब्याचको अध्ययन सकेर अहिले एक जिल्ला अस्पतालमा खटिएका एक विद्यार्थी भन्छन्, “अरू साथीहरूसँग त कलेजले ५३ हजार नै असुल्यो । मैले २० हजार बुझएपछि बल्ल परीक्षा फारम भर्न दिइयो ।” उनी आफूभन्दा पछिल्लो ब्याचका विद्यार्थीबाट कलेजले रु.१ लाखभन्दा बढी असुलिरहेको बताउँछन् ।
अहिले युनिभर्सलमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत १४ विद्यार्थीबाट आन्तरिक र वार्षिक जाँच वापत वर्षेनि रु.२५ हजार असुल्ने गरिएको छ । यसबाहेक भर्ना हुने समयमा कलेजले दर्ता र परीक्षा वापत भन्दै प्रति विद्यार्थी रु.२५ हजार असुलेको थियो । एक विद्यार्थी भन्छन्, “कलेजले नियममै नभएको शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुलेर लुटिरहेको छ । रकम नतिरे परीक्षामा बस्न नपाइने भएकोले हामी अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य छौं ।”
सन् २०१३ मा कान्तिपुर डेन्टल कलेज मार्फत पढाइ शुरु भयो । तर, भर्ना हुने बेलामै हाम्रो ब्याचका विद्यार्थीलाई विभिन्न बहानामा रु.१ लाख बढी रकम तिर्नुपर्छ भनिएपछि तनाव भयो । हामीले पछि तिर्छौं भन्दै टार्यौं । तर, पहिलो वर्षको परीक्षा आएपछि कलेजले हामीलाई रकम नतिरेसम्म फारम भर्न नदिने भनियो ।
सोर्सफोर्स लगाएर रु.२० हजार तिरेर बाँकी पछि तिर्ने सहमतिमा परीक्षा फारम भर्यौं । हामीले यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठन गुहारेपछि बल्ल कलेजले फारम भर्न दिन्थ्यो । परीक्षा फारम भर्ने आशामा बाँकी रकम पछि बुझाउने भनेर कागजमा हस्ताक्षर गर्न हामी बाध्य भयौं ।